22Bet UBhaliso - Uyenza njani iAkhawunti eNtsha ye-22BET?
Kutheni Bhalisa kwi-22bet?
22Bet Bhalisa kunye Social Network
22Bet Bhalisa ukubheja nge-imeyile
22Bet Bhalisa ukubheja ngefowuni
ISIKHOKELO FOR 2022
Amanyathelo aKhawulezayo ukubhalisa kwi-22Bet
Ukubhalisa, kufuneka ucofe iqhosha elithi Bhalisa, ephawulwa ngumbala wayo oluhlaza oqaqambileyo phezulu, kufutshane nekona yasekunene.
Enye indlela isuka kwiqhosha elineleyibhile efanayo – Bhalisa, ngaphantsi kwesiliphu sokubheja kwicala lasekunene lephepha.
Nje ukuba uvule iphepha lokubhalisa, kufuneka ugcwalise zonke iindawo ezifunekayo ukuze ukwazi ukugqiba inkqubo yokubhalisa.
Unokukhetha phakathi kobhaliso olupheleleyo kunye nokubhaliswa ngeintanethi zentlalo okanye abathunywa.
Ngalo naluphi na uhlobo lobhaliso, kufuneka uvumelane nemigaqo yokusetyenziswa ekupheleni ukuze ugcwalise kwaye wenze i-akhawunti nge 22Bet.
Kutheni Bhalisa nge 22Bet?
Ukubhalisa kwiwebhusayithi yebhuki kuzisa inzuzo eyaneleyo, esiza kubalaselisa apha ngezantsi. Ulwazi oluneenkcukacha malunga namacandelo alunakujongwa ngabasebenzisi abangabhaliswanga.
Ekubhaliseni kwaye emva kokwenza idiphozithi yokuqala, wonke umthengi omtsha ufumana ibhonasi ye 100% kwisixa-mali sedipozithi. Unokukhetha phakathi kwebhonasi yecandelo leMidlalo, kunye nebhonasi yecandelo Casino.
Indawo inengxoxo ephilayo, apho unokubuza imibuzo kubasebenzi abanika inkxaso abasemsebenzini nangaliphi na ixesha.
Indawo ixhasa iinguqulelo kwi 60 iilwimi
Ikhasino ye-22Bet inengqokelela yemidlalo evela kubaphuhlisi abaninzi abahlukeneyo, kwaye uluhlu luhlala longezwa kulo. Oku kuqinisekisa ezahlukeneyo kubadlali.
Indawo ibonelela ngoguqulelo olululo lweselula, kunye neeapps ezimbini eziphathwayo – ye-iOS kunye ne-Android.
22Bet UBhaliso – IsiKhokelo esineenkcukacha
Emva kokucofa iqhosha elithi Bhalisa, ukhetho olupheleleyo lobhaliso luyavula. Ukususela kwikhonkco phezulu ngasekunene ungakhetha ukubhalisa nge-social network okanye umthunywa, kwaye ukusuka kwikhonkco elingasentla ekhohlo ungabuyela kukhetho olupheleleyo lobhaliso.
Yenza iAkhawunti ngokusebenzisa iNethiwekhi yeNtlalo okanye uMthunywa
Ukhetho olufutshane lokubhalisa lusebenzisa inethiwekhi yoluntu okanye umthunywa. Kodwa ezi intanethi ziyaziwa kwaye zisetyenziswa ikakhulu eRashiya. Kwezi, inethiwekhi Google Plus isetyenziswa ngokubanzi ngaphandle Russia.
Apha kufuneka ukhethe kuphela imali, ilizwe kunye nenethiwekhi yoluntu, kwaye emva koko uvumelane neMigqaliselo kunye neMiqathango yombhuki ukugqiba ubhaliso.
Kodwa abo bakhetha le ndlela yokubhalisa bafanele bakhumbule ukuba kuya kufuneka bagcwalise iinkcukacha zabo zobuqu kamva, njengabathengi abahamba ngenketho epheleleyo.
22BET UKUBHALISA NGOBHALISO KUNYE NETWORK YOLUNTU
Ukwenza i-Akhawunti ye-22Bet ngoBhaliso olupheleleyo – Inyathelo nenyathelo
Kwifestile yobhaliso epheleleyo evula emva kokucofa iqhosha lokubhalisa, kufuneka ugcwalise idatha yakho yobuqu ngolu hlobo lulandelayo:
Okokuqala gcwalisa idilesi ye-imeyile oza kuyisebenzisa ku-22Bet.
Isibini, Gcwalisa igama lakho.
Isithathu, Gcwalisa ifani yakho.
Isine, Gcwalisa igama lokugqitha oza kulisebenzisa kwisiza.
Isihlanu, khetha ilizwe osebenzisa isiza kulo. Inkqubo ichonga ukuba usuka kweliphi ilizwe. Imenyu eyehlayo isetyenziselwa ukukhetha elinye ilizwe.
Isithandathu, khetha imali oza kuyisebenzisa. Inkqubo ikhetha ngokuzenzekelayo kwindawo yakho, kodwa ungakhetha enye imali kwimenyu eyehlayo.
Isixhenxe, kufuneka uphawule ibhokisi phambi kokuba ubhengeze ukuba uyayamkela iMigqaliselo neMiqathango yombhuki.
Isibhozo, okufuneka ukwenze kukucofa iqhosha eliluhlaza REGISTER ukugqiba ukubhalisa.
22BET UKUBHALISA NGE-imeyile
Iingcaciso ezibalulekileyo kunye neMithetho yoBhaliso lwe-22Bet
– Kubalulekile ukuba ufake idilesi ye-imeyile yangoku njengoko oku kuya kusetyenziswa kwiqela lenkxaso ukuba liqhagamshelane nawe. Ukuba i-imeyile yakho ayikho kumhla, awuyi kukwazi ukufumana ikhonkco lokuqinisekisa ubhaliso lwakho okanye ukufumana izaziso, njengeebhonasi zangoku okanye ezizayo kunye nolunye ulwazi olubalulekileyo.
– Nje ukuba ugcwalise inkqubo yobhaliso epheleleyo, ifestile iya kuvula apho uza kubona ikhowudi enamanani ali-9. Eli ligama lakho lokusebenzisa le sayithi. Uya kubona kwakhona ibhokisi yokufaka igama lokugqitha lakho.
– Ngaphakathi 72 iiyure, kufuneka uqinisekise ubhaliso lwakho ngekhonkco oza kulifumana nge-imeyile.
– Ungayibhala phantsi ikhowudi, eliligama lakho lokusebenzisa le ndawo, kodwa ungangena kwiakhawunti yakho ngedilesi yeimeyile yakho.
– Emva kokubhalisa, kufuneka uchaze ukuba yeyiphi ibhonasi yokwamkela ofuna ukuyisebenzisa – kuba icandelo Sports okanye icandelo Casino, okanye ubhengeze ukuba awufuni ukusebenzisa naziphi na iibhonasi.
Ukhuseleko Xa Ubhalisa kwaye Usebenzisa iSiza
Ukufaka idatha yobuqu, ukuthumela ikopi yoxwebhu lokuqinisekisa kunye nokusebenzisa iindlela zokuhlawula kwi-22Bet zikhuselwe ngokupheleleyo. Umbhuki unelayisensi yi Curacao Gambling Authorities. Inombolo yelayisensi ngu-8048/JAZ. Ikhutshwe ngoNovemba 16, 2018 kwaye isebenza kude kube nguNovemba 28, 2023.
22Bet UBhaliso ngeFowuni ephathwayo
Xa ubhalisa ngoguqulelo oluphathwayo lwesiza okanye nge-apps, inkqubo iyafana, ngokukhetha enye yeentlobo ezimbini zobhaliso.
– Inguqulelo epheleleyo ikwafuna isiqinisekiso sobhaliso ngekhonkco elingaphakathi 72 iiyure.
– Xa ubhalisa ngesixhobo esiphathwayo, awuyi kukwazi ukusebenzisa inguqulelo yesiNgesi. Ifom yobhaliso ifakwe ngesiNgesi.
22BET UKUBHALISA NGOBHEDO NGEFONI EPHATHEKAYO
22Bet Akhawunti Verification
Ukuqinisekiswa yinkqubo esetyenziswa ngabo bonke ababhuki kwi-intanethi ukuqinisekisa ukuba ngaba abathengi. Ngexesha elithile emva kokubhalisa, uya kucelwa ukuba uqinisekise iinkcukacha zakho ngoxwebhu lwesazisi. Nantsi indlela inkqubo esebenza ngayo.
Ndiqinisekisa njani kwi-22Bet?
Nje ukuba wenze i-akhawunti ngobhaliso oluyimpumelelo, kufuneka ugcwalise iinkcukacha ezithile zobuqu kuyo. Ezi ziquka:
– usuku lwakho lokuzalwa;
– uluhlu lwesazisi sakho samkelwe ngumbhuki (Ikhadi lesazisi okanye ipasipoti);
– inombolo yakho yesazisi;
– yeyiphi idolophu kunye nendawo ohlala kuyo.
Ukuqinisekiswa ngoxwebhu kwenziwa emva kokufowunelwa ngubhuki. Ithunyelwa kwi-akhawunti kwiwebhusayithi. Kufuneka uthumele iikopi eziskeniweyo okanye iifoto zamaxwebhu akho esazisi ukuqinisekisa iinkcukacha zobuqu ezifakwe kubhaliso. Iikopi okanye iifoto zithunyelwa nge-imeyile.
Xa Uyalelwe ukuba uQinisekise iAkhawunti yakho ye-22Bet, Kufuneka Wenze Oku Kulandelayo:
– Thumela ikopi (scan okanye ifoto) yoxwebhu lwesazisi kwiqela likabhuki
kumaxwebhu afana nekhadi lesazisi kufuneka wenze iikopi zamacala omabini oxwebhu.
– 22Ubhejo ludla ngokufuna le nkqubo phambi kokuba unikezele ngesicelo sokurhoxa.
Uqinisekiso loTshintsho lweBhanki
Xa intengiselwano iza kwenziwa ngodluliselo lwebhanki, umbhuki unezi mfuno zongezelelweyo zilandelayo:
– Ukuba usebenzisa ikhadi letyala, kufuneka wenze iikopi zamacala omabini ekhadi. Icala elingasemva kufuneka libe nesiginitsha yakho.
– Kufuneka uthumele ikopi yoxwebhu olusemthethweni olubonisa idilesi yakho yeposi ukuba idilesi yahlukile kwidilesi yakho esisigxina kwi-ID yakho.
– Umbhuki unokufuna amanye amaxwebhu ngokubona kwakhe.
Ukuqinisekiswa kwe-E-wallet Ukurhoxiswa
Ngolu hlobo lokurhoxisa, 22Ukubheja kunokufuna amaxwebhu ongezelelweyo ukuba isixa-mali sentengiselwano singaphezulu komda othile
Ukubhalisa kwiwebhusayithi ye-22Bet kulula. Gcwalisa zonke iinkcukacha emva kokukhetha indlela yokubhalisa. Kukhethwa ubhaliso olupheleleyo, njengendlela emfutshane, ngokusebenzisa inethiwekhi yoluntu okanye umthunywa, ayizukukusindisa ekungeniseni ezi nkcukacha emva kwexeshana.
Kubalulekile ukukhetha ibhonasi, nokuba yecandelo lezemidlalo okanye yekhasino, emva kokubhalisa ukuze ukwazi ukuthatha ithuba lemali yenkuthazo. Gcwalisa imithetho enxulumene nokusetyenziswa kweemali zebhonasi, kunye neebhonasi ezingaphezulu zikulindile, kunye neentlobo ngeentlobo zeziganeko zemidlalo kunye nemidlalo yekhasino, njengabathengi abasele bebhalisiwe bebhukimayikhi.